महासंघमा ४ संगठनको ऐक्यबद्धता
२०७७, चैत्र १०
प्यूठान, नेपाल पत्रकार महासंघको आसन्न निर्बाचनलाई सफलतापुर्वक सम्पन्न गर्न जिल्लाका ४ संगठनले एकता गरेका छन् । महासंघको केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला तहको आगामी चैत्र २५ गते हुन गइरहेको निर्वाचनमा एकता गरेर जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । महासंघलाई सकेसम्म सर्बसम्मत ढंगले लैजान पहल गर्ने गरी ऐक्यबद्धता घोषणा गरिएको प्रेस संगठनको तर्फबाट वार्ता टोलीका संयोजक सुशील पोख्रेलले जानकारी दिए ।
यस्तो छ बिज्ञप्ती(पूर्ण पाठसहित)
मितिः २०७७ चैत्र ०९ गते
नेपाल पत्रकार महासंघको आसन्न निर्बाचनलाई सफलतापुर्वक सम्पन्न गर्नु हामी सबै क्रियाशिल पत्रकारहरुको दायित्व होे । महासंघको केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला तहको आगामी चैत्र २५ गते हुन गइरहेको निर्वाचन कार्यक्रमको हामी स्वागत गर्दछौं । हामी तपशिल बमोजिमका प्यूठान जिल्लामा क्रियाशिल पत्रकार महासंघको सबै तह (केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला)को निर्बाचनलाई सफल बनाउन आ–आफ्नो संगठनको अस्तित्वलाई स्वीकार गरी सहकार्य गरेर निर्बाचनमा अगाडि बढ्ने सहमती गरेकाछौँ । दृढतापुर्बक पालना गर्ने हाम्रो यो सहमति सँगै महासंघ प्यूठान शाखालाई व्यवसायिक पत्रकारहरुको साझा संगठनको रुपमा अगाडि बढाउन अन्य पेशागत संघ संगठनलाई समेत सहकार्यका लागि आह्वान गर्दछौं ।
हामी निम्न बिषयमा प्रतिबद्ध हुनेछौंः
१. हामी श्रमजीवी पत्रकारहरुको हकहितको पक्षमा नेपाल पत्रकार महासंघको निर्बाचनमा एकताबद्ध भई सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता गर्दछौँ ।
२.नेपाल पत्रकार महासं.घको निर्बाचनमा बिभिन्न जातजाति, भाषा, क्षेत्र र लैंगिक रुपमा अधिकतम साझा र समावेशी हुनेगरी सबै क्रियाशिल संघ संगठनहरुलाई सहकार्यका लागि आह्वान गर्दछौँ ।
३. पत्रकारहरुको पेशागत एवम् भौतिक सुरक्षाका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता रिोधी कानुनको खारेजीको माग गर्दछौ ।
४. नेपाल पत्रकार महासंघ प्यूठान शाखालाई अधिकतम सर्ब सहमतीय प्रणालीमा लैजान पहल गर्नेछौँ ।
पछिल्लो पटक सिफारिस भएका पत्रकारहरुको सदस्यता स्वीकृत भएसँगै नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा प्यूठानमा आवद्ध पत्रकारहरुको संख्या १ सय ५५ पुगेको छ। यसअघि १ सय १६ जना कायम भएको महासंघको सदस्यता संख्यामा यस वर्षदेखि २९ जना नयाँ सदस्य थपिएका छन् । चैत २५ गते हुने नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र एशोसियट तर्फको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै महासंघले सवै जिल्लाका सदस्यहरुको संख्या सार्वजनिक गरेको छ । चुनावको मिति नजिकिदै गर्दा नेतृत्वको लागि पत्रकारहरुबीच आन्तरिक जोड घटाउको रस्साकस्सी शुरु हुन थालेको छ ।
हेर्नुहोस् पत्रकारहरुको नामावली :